Iibka dhamaadka sanadka 'Red Giant' wuxuu soo laabanayaa si ka fiican oo ka fiican sidii hore weligiis 10-kii Diseembar | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Iibka dhamaadka sanadka 'Red Giant' wuxuu soo laabanayaa si ka fiican oo ka fiican sidii hore weligii Diseembar 10th
Iibka dhamaadka sanadka 'Red Giant' wuxuu soo laabanayaa si ka fiican oo ka fiican sidii hore weligii Diseembar 10th
Portland, AMA - Noofembar 26, 2019 - Laba toddobaad gudahood, Red Giant waxay bilaabi doontaa iibkeeda sanadka dhamaadkiisa, the 24-saac isugeyn sanadle ah dhammaan aaladda Red Giant, oo ka bilaabmaya 8: 00 am PST (11: 00 am EST) Talaadada, Diseembar 10, 2019 illaa 8: 00 am PST (11: 00 am EST) Arbacada, Diseembar 11, 2019. Iibka sanadkaan wuxuu noqon doonaa kan ugu weyn ee wali jira: macaamiisha waxay heli doonaan xNUMX% off Red Giant Complete, rukhsad siineysa tifaftirayaasha, naqshadeeyayaasha mooshinka iyo farshaxanada VFX inay marin u helaan dhammaan aaladda Red Giant hal qiimo hooseeya - Trapcode Suite, Magic Bullet Suite , Caalamka, VFX Suite iyo Shooter Suite. Wax kasta oo kale oo ku jira dukaanka qadka ayaa laga iibin doonaa 50% off.
MA HABOON: RED GIANT 2019 SANO SANO SALEEB AH
Win Red Giant oo Dhameystiran - Hal sano oo buuxa oo ah barnaamij bilaash ah
Labada toddobaad ee soo socda, Red Giant waxay siin doontaa barnaamij bilaash ah software-ka XXX saac kasta. Si fudud u raac @redgiantnews Twitter-ka oo dib ugula soo xiriir tweets-ga tartanka gaarka ah iyadoo la isticmaalayo hashtag #RGYearEndSale fursad ah inaad ku guuleysato hal sano oo rukumad ah oo loo yaqaan 'Red Giant Complete'. Gali hal mar 12 saacadood kasta fursad aad ku guuleysato. Tartanka wuxuu dhammaanayaa Isniinta Diseembar 9, 2019, oo ku taal 6: 00 pm PST (9: 00 pm EST). Taasi waa fursadaha 24 inay ku guuleystaan ​​kumanaan barnaamijyo bilaash ah.
Sida loo Badbaadiyo Waxkasta Oo Casri Ah
Jooji heshiisyada Jimcaha ee Black Friday iyo Cyber ​​Isniinta ee Sanadlaha Dhaafka ah ee 'Red Giant Year End Sale', iyadoo laga dhimayo qiima dhimis lagu dabbaqi karo rukhsadaha, buuggaag buuxa, alaabooyin gaar ah, iyo casriyeyn. Waa tan wax kasta oo dukaanleydu u baahan yihiin inay ogaadaan:
50% off Red Giant Dhamaystiran *
30% kabax Waxkasta oo Kale *
Iibinta daboolida ​Qiimaynta waxbarashada * (oo horeyba ugu jiray 50% ardayda iyo macallimiinta)
The Barnaamijka mugga waxaa sidoo kale lagu dari doonaa markii ugu horreysay abid, kuwa iibsanaya shan liisan ama ka badan.
24 Saacadood Kaliya!
Iibintu waxay bilaabmaysaa: 12 / 10 / 19 at 8: 00 am PST
Iibka ayaa dhammaanaya: 12 / 11 / 19 at 8: 00 am PST
Tusaalooyinka kaydinta qaarkood waxaa ka mid ah:
Red Giant dhameystiran: Badanaa $ 599 / yr. Kusoo iibso kaliya: $ 299
Trapcode Suite 15: Badanaa $ 999. Kaga iibso kaliya $ 699
VFX Suite (CUSUB!): Caadi ahaan $ 999. Kaga iibso kaliya $ 699
Magic Bullet Suite 13: Badanaa $ 899. Kaga iibso kaliya $ 629
PluralEyes 4: Badanaa $ 299. Kaga iibso kaliya $ 209
Universe*: Badiyaa $ 199 / yr. Kaga iibso kaliya $ 139
Kuwani waa tusaalooyin uun - wax kasta oo aan iibinno waa iib. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaan halkaan kuu joognaa annaga. Caawimaad, kala xiriir: redgiant.com/support.
Iibsashada Shan Liisan ama Ka Badan?
Haddii aad tahay meherad, urur, dugsi, ama jaamacad aad ku iibsanayso shan liisamo ama in ka badan, Red Giant waxay bixineysaa 50% qiimo dhimis mugga macaamiisha cusub ee 'Red Giant Complete *. Baro waxbadan oo ku saabsan faa'iidooyinka Barnaamijka mugga halkan. Fadlan la xiriir kooxda mugga faahfaahin buuxda.
* Xusuusin Muhiim ah:
Qiimaha laga dhimay diiwaangelinta ayaa ah qiimeyn hor dhac ah oo hal mar ah. Intaas ka dib, qiimaha dib u cusboonaysiinta ayaa noqon doona khidmadda sannadlaha ah.
Iibkaan wuxuu ka saarayaa dib u cusbooneysiinta dhammaan rukumooyinka firfircoon iyo ka-dhimista sannadlaha ah iyo rukummada billaha ah ee Jaamacadda.
Haddii aadan waligaa lahaan jirin rukhsad sanadle ah oo Jaamacadeed, waad u qalantaa xayeysiintaan.
Iibiyaasha Tacliinta: Waxaa si xoogan lagula talinayaa ardayda iyo macalimiinta inay nala soo xiriiraan iyo ka hor inta aan la iibsan ka hor inta aan la iibsanin.
Red Pledge waa ballanqaadkii Red Giant ee farxadda macaamiisha, iyada oo aan wax iibsasho ah uusan jirin. Wax ka baro damaanad qaadka Laanqayrta Cas www.redgiant.com/company/red-pledge/.
Codso Qalabka Dib ufiirinta ee Warbaahinta oo dhameystiran
Xubnaha warbaahinta waxaa lagu casuumay inay dib-u-eegaan agab kasta oo shaqsiyeed ama qoraalo ka soo baxa Red Giant. Wixii macluumaad dheeraad ah ama aad u codsato xirmada qalabka dib u eegista, fadlan kala xiriir Cat Soroush at [Email ilaaliyo].
Red Giant waa shirkad software ka kooban fanaaniin tayo iyo farsamoyaqaanno kuwa la shaqeeyaan si ay u abuuraan qalab gaar ah filim, tafatirayaasha, fanaaniinta VFX, iyo samaynta dhaqdhaqaaq. dhaqanka Our shirkadda waxaa diiradda lagu helo dheelitirka u dhexeeya shaqada iyo nolosha - aynu ugu yeerno "the line double hoose" - falsafada na caawisaa iska indha adayga ay guushu ku dhiso qalabka fudud in dhali natiijada Rafaa. In ka badan tobankii sano ee la soo dhaafay, waxyaabaha our (sida rasaasta Magic, Trapcode, Caalamka iyo PluralEyes) ayaa noqday ee caadiga ah ee filimada iyo baahin post-soo-saarka. Iyadoo in ka badan 250,000 isticmaala, waa suurtagal in ay daawadaan 20 daqiiqo TV aragla'aan our software in la isticmaalo. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada sida farshaxan iyo filim, waxaan u furan tahay in kaliya ma ahan siiyaan qalab farshaxan, laakiin waxyoonay iyo sidoo. Daawo filimaan our, ka 200 Casharrada free bartaan, ama isku day our software at www.redgiant.com.
(E) [Email ilaaliyo]
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Graham Chapman Prmoted toEditor Spears & Fiilooyinka Ultra HD Forum Video Engineer	2019-11-26
Previous: AWS Elemental MediaLive Waxay Bixisaa Tirakoobyo Tirakoobyo Tiro Badan oo Ka Wanaagsan Tayada Wanaagsan, Waxqabadka, iyo Maareynta Xarig
Next: Wirecast wuxuu barayaa Kubadda Cagta Mareykanka ee Jarmalka!